किसानको तरकारी किनिदिने कस्ले ? NewsButwaltoday
किसानको तरकारी किनिदिने कस्ले ?
पछिल्लो समय जिल्लामा उत्पादित काउली र बन्दागाभी लगायतका तरकारीले उचित मुल्य नपाए पछि किसानहरु चिन्तित हुन थालेका छन । आर्थिक लगानी र श्रम अनुसारको मुल्य नपाए पछि किसानहरु चिन्तित हुन थालेका हुन । भारतीय तरकारीका कारण बारीमा उत्पादित तरकारीले मूल्य नपाएको भन्दै कपिलवस्तु नगरपालिका ३ बरण्डिहवाका कृषक भगवती यादवले ६ कठ्ठा जग्गाको क्षेत्रफलमा लगाएको काउली र बन्दा गोभी निशुल्क बितरण गरेका छन् ।
सरकार जमिन बाँझो राखे कार्वाही गर्ने भन्छ खेती गरे बिक्री हुदैन उनले भने, उब्जिएको तरकारी किनिदिने पनि व्यवस्था गरिदिनु पर्यो ।
ग्त हप्ता हाट बजारमा ४ कुन्टल तरकारी पुर्याउदाँ ६ सय ५० रुपैया मात्रै पाएको उनले अनुभव सुनाए । “बजार सम्म तरकारी पुर्याउदाँ गाडी भाडा सम्म उठदैन । मुल्य बढछ कि भनेर कुर्दा भारतिय तरकारीका कारण मुल्य पाईदैन ।” उनले गुनासो गरे । सानो बजार क्षेत्र तथा ढुवानीका असुबिधा सगै बजारीकरणका लागी सरकारी योजनाको अभावमा जिल्लाका कृषक बिभिन्न समस्या झेल्न बाध्य छन । उत्पादित तरकारीको बजार मुल्य नपाए पछि कृषक यादवले आफुहरुलाई निशुल्क तरकारी बितरण गरेको स्थानिय गणेश भट्टराईले बताए । “हामीले तरकारी किन्दा तिन गुणा मुल्य लिन्छन । किसानले फलाएको तरकारी बिक्दैन ।” भट्टराईले भने ।
सरकारले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै गर्दा कृषकका साना समस्या समेत सम्बोधन नहुनु दुखद भएको यादवले बताए । त्यसो त बजारमा आम उपभोक्ताले भने सोहि काउली र बन्दा १५ देखी २० रुपैया केजी खरिद गर्दै आएका छन । तर बिचौलियाले भने किसानको काउली ३ रुपैया केजीमा किन्ने गरेका छन । कपिवलवस्तु नगरपालिका ११ पचेहराबाट गोलभेडा बेच्न सदरमुकाम तौलिहवा आएका राधेश्याम केवटलाई पनि मुल्य नपाउदाँ निरास हुनु परयो । समयमा तरकारीको मुल्य नपाउदाँ कतिपय किसानले उब्जायका तरकारी खेतमै कुहिने गरेको उनले अनुभव सुनाए । सदरमुकाममा दैनिक तीन मेट्रिक टन तरकारी खपत हुने गरेको अनुमान गरिने गरेको छ । लगानी अनुसारको उत्पादनबाट मुल्य नपाए पछि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्नेहरू समस्यामा परेको कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलबस्तुका प्रमुख सहसराम चौधरी बताउँछन् ।
अपडेट : 2019-02-22 19:04:44